मोटोपनले चिन्तित बनाएको छ ? पालना गर्नुहोस् यी ६ नियम - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com मोटोपनले चिन्तित बनाएको छ ? पालना गर्नुहोस् यी ६ नियम - खबर प्रवाह
अधिकाशं मानिसमा आफुमा बढ्दै गएको मोटोपन कम गर्नु निकै कठिन काम हो । सहज र छोटो अवधिमा नघट्ने भएकाले मोटोपना कम गर्न मानिसहरु हत्तपत सक्दैनन् ।
तसर्थ बढेको शरीरको वजनमा नियन्त्रण पाउन केहि नियमको भने पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता छन् मोटोपना घटाउने नियम :
१. शरीरको वजनमा नियन्त्रण गर्न पहिले क्यालोरी प्रतिबन्ध गर्नु पर्दछ । यसका लागि एकदिन केही नखाई ब्रत जस्तै बसेर अर्को दिन नियमित खाना खानु पर्दछ । अर्थात पहिलो दिन तरल पर्दाथको मात्र सेवन गर्ने र भोलिपल्ट मात्र भोजन गर्नुपर्दछ ।
२. मोटोपना घटाउन तपाईमा पानी र हर्बल चिया पिउने बानीको विकास गर्नु पर्दछ । यसले तपाईंको क्यालोरीको मात्रा नियन्त्रण गराउन भुमिका खेल्दछ ।
३. खाना खादाँ अत्यधिक वा पटक पटक खानु हुदैन । हरेक पटक खाना खादाँ ५/६ घण्टा फरक हुनु पर्दछ । यो बीचमा पानी बाहेक केहि खानु हुदैन । यसो गर्नाले मेटाबोलिजम पनि सुधार हुन्छ ।
४. मोटोपना घटाउन चाहने ब्यक्तिले सातामा ५ दिन खाना र २ दिन ब्रत बस्नु पर्दछ । ब्रत बसेको दिन ५ सय क्यालोरी मात्र सेवन गर्नु पर्दछ ।
५. खाना खादाँ पनि थोरै मात्रामा खानु पर्दछ । अधिकाशं नेपालीमा खानाको अवधी लामो पार्ने र एकसाथ धेरै खाने बानी हुन्छ । तर मोटोपना बढ्नुको मुख्य कारण यहि हो । त्यसैले यसलाई सुधार गर्नु पर्दछ ।
६. खाना वा खाजामा कुनै पनि परिकार खादाँ सकेसम्म फाइबरयुक्त खाने गर्नु पर्दछ । कार्बाेहाइट्रेडयुक्त खान कम खानु पर्दछ ।